နန်းဆန်တဲ့ အလှတရားများနဲ့ ကြွေအောင် ညှို့ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည် - Zeekwat Hot News
June 13, 20190793
ရွှေအိမ်စည်ကို မြန်မာဝတ်စုံလေးများနဲ့ မြင်ခဲသလို မြန်မာဆန်တဲ့ အပြင်အဆင်အခြယ်အသမျိုးနဲ့တော့ မြင်ရခဲခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လတ်တလောမှာတော့ မိန်းကလေးဆန်ဆန်၊ မြန်မာဆန်ဆန် ကြော့ရှင်းလှပနေတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ “So Burmese 💁. အရမ်းများ မိန်းမဆန်သွလားလား😌” လို့ ချစ်စဖွယ်ကောင်းစွာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ရွှေအိမ်စည်က ရဲရင့်ပြီး ပြတ်သားတဲ့သူလို့ ပရိသတ်ထုကြီးက ထင်ကြေးပေးကာ လေးစားအားကျခဲ့ကြပြီး သူမအနေဖြင့် ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ ရှပ်ရှင်ရိုက်ရမယ်ဆိုရင် ရှက်စရာမလိုဘူးလို့ သူမရဲ့ ခံယူချက်လေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ရွှေအိမ်စည်ဟာ အလှမယ်တစ်ဦးအဖြစ် အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်သူဖြစ်ပြီး သူမကို အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ အမာခံပရိသတ်များကလည်း ဒုနဲ့ဒေး များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဟန်ပန်အပြုအမူများကြောင့် ပရိသတ်များက သူမကို သည်းသည်းလှုပ် သဘောကျခဲ့ကြပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်ဟာ အနုပညာလောကထဲသို့ ၀င်ရောက်လာပြီသာမက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများနဲ့ ကြော်ငြာများကိုလည်း ရိုက်ကူးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
Source From Shwe Eain Si
ရှအေိမျစညျကို မွနျမာဝတျစုံလေးမြားနဲ့ မွငျခဲသလို မွနျမာဆနျတဲ့ အပွငျအဆငျအခွယျအသမြိုးနဲ့တော့ မွငျရခဲခဲ့ပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ လတျတလောမှာတော့ မိနျးကလေးဆနျဆနျ၊ မွနျမာဆနျဆနျ ကွော့ရှငျးလှပနတေဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ ဓာတျပုံရိုကျကူးရေး လုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ “So Burmese 💁. အရမျးမြား မိနျးမဆနျသှလားလား😌” လို့ ခဈြစဖှယျကောငျးစှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ရှအေိမျစညျက ရဲရငျ့ပွီး ပွတျသားတဲ့သူလို့ ပရိသတျထုကွီးက ထငျကွေးပေးကာ လေးစားအားကခြဲ့ကွပွီး သူမအနဖွေငျ့ ဝတျလဈစလဈနဲ့ ရှပျရှငျရိုကျရမယျဆိုရငျ ရှကျစရာမလိုဘူးလို့ သူမရဲ့ ခံယူခကျြလေးကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ရှအေိမျစညျဟာ အလှမယျတဈဦးအဖွဈ အောငျမွငျစှာ ရပျတညျနိုငျသူဖွဈပွီး သူမကို အားပေးခဈြခငျကွတဲ့ အမာခံပရိသတျမြားကလညျး ဒုနဲ့ဒေး မြားပွားလာခဲ့ပါတယျ။ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ဟနျပနျအပွုအမူမြားကွောငျ့ ပရိသတျမြားက သူမကို သညျးသညျးလှုပျ သဘောကခြဲ့ကွပါတယျ။ ရှအေိမျစညျဟာ အနုပညာလောကထဲသို့ ဝငျရောကျလာပွီသာမက ရုပျရှငျဇာတျကားမြားနဲ့ ကွျောငွာမြားကိုလညျး ရိုကျကူးနရေပွီဖွဈပါတယျ။
စိမ်းစိုအေးချမ်းတဲ့ ပုဂံမြေလေးကို ပြန်သွားချင်မိတယ် ဆိုတဲ့ ရွှေအိမ်စည်